Yunivarsitiin Baahirdaar barattoota 1400 ol mooraa keessaa hari'e - BBC News Afaan Oromoo
Yunivarsitiin Baahirdaar barattoota 1400 ol mooraa keessaa hari'e
Madaalliin gahumsaa (holisitiik) Yunivarsitii Baahirdaariin barattoota waggaa 4ffaa Insititiyuutii Teknolojiitiif kennamu barattoota biratti komii uumeera.
Yunivarsitichatti barattoonni maandisummaa waggaa 4ffaa 1,400 olii ta'an maddaalichi seera qabeessa miti jechuu isaanitiin dallaa keessa akka baafaman taasifamiiru.
Barattoonni bilbilaan dubbifne akka jedhanittis, madaallichaaf yeroon qophii gahaan nuuf hinkennamne, sirni madaallichaas haaraa fi fudhatama kan hinqabneedha.
Barataan maqaansaa akka caqasamu hin barbaannee tokko BBCtti akka himeetti, ''qormaata madaallii akka fudhannu kan maxxanfamee agarre guyyaa shan keessatti. Kun ammoo qophii akka taasifnuuf yeroo gahaa miti. Fakkeenyaaf, barattoonni maandisummaa siviilii, qorannoon waliigalaa kan bahu gosa barnoota (course) 26 keessaayi. Guyyoota 5 keessatti sana hunda dubbisanii qormaataaf qophaa'uun ammoo baayyee cimaadha.
Kana malees, sirni maddaalii kan kanaan dura barameen adda ta'uus koomii dhiyeessu.
''Sirni madaallii kana dura ture, haala sirna qabxii kennuutiin ture. Kana jechuunis, qabxiin qormaataa kan ibsamuu 'A' hanga 'F'tti ture. Barattoonni bara 2099 haaluma sirna madaallii kana keessa darban. Har'a garuu hafee jecha 'darbe' ykn 'kufe' jedhuun akka ta'u taasifameera. Haala kanaanis qabxiin qormaata keessa %50 gadi yoo ta'e waggaa tokko gara duubaatti akka hafnu nu taasisa. Duraan, barataan 'F' fide tokko shaakkaliidhaaf bahee waggaa itti aanuutti akka qoramu taasifamaa akka ture, dubbattu.
Haala amma barattoonni keessatti argaman
Yunivarsitichatti barattoonni waggaa 4ffaa damee maandisummaa karoora baheen qormaaticha fudhachuu kan qaban Fuulbaana 18 ture. Erga qormaaticha akka hinfudhanne Yunivasrisitichatti himaniin booda, tajaajila nyaataa fi ciisichaa argataa turan dhaabbachuun Wiixata tare poolisiin dallaa keessa akka bahan taasifamaniiru.
"Kanneen Baahirdaar keessaa fira qabanii gara firoottan isaanii deemaniiru. Warri fira hinqabne ammoo dallaa batasikaanaa dahannee turru illeen, poolisiin dallaa batasikaanaatii baanee gara maatii keenyaa akka deebiinuuf nu dirqiisiisaa jira," jedhaniiru.
Hanga yunivarsitichi murtee dhumaa nu beeksiisutti garamiyyuu hindeemnu kan jeedhan barattoonni kunneen, poolisiin Kibxata galma batasikaana Abuna Gabira Manfasi Qiddus keessaa waan baaseef bakka boqonnaa barbaachaa jiraachuu BBCitti himaniiru. ''Yunivarisitichi sadarkaa gadaanaan nu barsiisee, waan guddaa nurraa eega,'' jechuun balaaleffataniiru.
Dr. Nigusee Gaabiiyee, Yunivarsitii Baahirdaariitti Daarektara Saayinsii, Insititutii Teeknoloojii yoo ta'an, ''Yaadni yeroon qormaaticha fudhachuuf nuuf kennamee gabaabaadha jedhu, sababii ta'uu hindanda'u,'' jedhu. ''Osoo barri barnootaa 2009 hinxumuramiin dura barattootaaf waa'ee qormaatichaa ibsa taasifnee turre. Akkasumas guca guuchiisuun gara maatiisaanii akka deebi'an kan taasifne,'' jedhu Dr. Niguseen.
Kana malees sirni maddallii kun, kanuma dur ture ta'uusaa kan dubbatan Dr Niguseen, barattoonnis qormaaticha fudhachuuf waan hinbarbaanneef dallaa keessaa akka baafamanis taasifamaniiru jedhaniiru. "Bajanni mootummaa kan bahu hojii qofaadhaaf. Barattoonnis qormaaticha fudhachuuf fedhii waan hinqabaanneefu yunivarsiticha irraa tajaajila kamiyyuu akka hinargannee beeksisuun dallaa gadi lakkisuun akka bahan taasifameera. Kana boodas, kan murtee argatan haaluma seera barnootichaatiin," jedhaniiru.
Mooyyaleetti kaleessa qofa yoo xiqqaate namoonni 13 ajjeefaman
Haati mucaashee du'uuf jedhu akka hin argine dhorkamte
Dubartiin daa'imashee ajjeesuuf yaaluun himatamte bilisa baate
Ameerikaan milishoota al-shebaab 62 ajjeese jette